Madaxwayne Farmaajo oo ku wajahan Dhuusamareeb iyo Xogta laga helay ! | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Aug 15, 2020 - 37 Aragtiyood
Garoowe ( Kalshaale ) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa galabta lagu wadaa in uu gaadho magaalada Dhuusomareeb ee caasimada Galmudug ,halkaas oola filayo in uu ka furmo shirka DFS iyo kuwa maamul goboleedyada.
Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo maanta tagayo magaalada Dhuusomareeb si uu u hogaamiyo wareega labaad ee shirka Dhuusomareeb ee loo balansanaa.
”Iyada oo la tixraacayo dadaallada socda ee la xiriira dowlad-dhisidda iyo sidii loo xoojin lahaa wadashaqeynta ka dhaxeysa DFS iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah, horena loogu sii dhaqaajin lahaa wada hadalladii socday, ayuu Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u safri doonaa magaalada Dhuusamareeb si uu u hoggaamiyo wareegga labaad ee Shirka Wadatashiga” ayuu yidhi Afhayeenka Madaxtooyada.
Shirka Dhuusomareeb ku yeelanayaan Madaxda dowlada iyo kuwa maamul goboleedyada ee go’aanka looga gaarayo doorashada dalka ayaa balantu aheyd in maanta dhaco hasa ahaatee waxaa muuqataa in dib u dhac kooban ku imaanayo Furitaanka Shirka.
Beesha Caalamka qoraal shalay kasoo baxay ayaa loogu baaqay Madaxda dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada in ay ka qeyb galaan shirka Dhuusomareeb si go’aan looga gaadho doorashada dalka.
Kablalax markii horeba waxey Dhuusamareeb u tageen inuu Kheyre Deynta ka dhiibo,
Hadde TUKE CAD HILIB AH heley inuu Xaar kuugu jawaabo filo.
– Farmaajo waa Tol laawe, Taladiisuna Waa Qabyo.
– waxaanse rabnaa inuusan
sidii C/Rashid CADKA lagu Dilin
sidii Max’ed Siyaad CADKA laga Ceyrin
Sidii C/llaahi Yuusuf CADKA laga ma saafurin.
Lkn sidii ilmo Xilwareejiye
Lagu qoro Buuga
1. C/llaahi Ciise 1958
2. Aadan Cadde 1967
3. Cali Mahdi 1991
4. C/qaasim 2007
5. Shiikh Shariif 2012
6. Xassan Shiikh 2017
No nin Cad lagu diley
No nin Cadka laga fujin waayey.
ayagoo Garbaha ka taagan ayey ama isku wajeejiyeey, ama ku wareejiyeen ILMO CAD KAMA KACE in lagu dilo ama ka cararaan maahane
Madaxweyne lagu qasbayo inuu la heshiiyo dad kiisa saw ayaandaro maaha? hade waa ninkii la rabay in uu meesha ka odayeeyo oo nabadoon iyo deganaan ka shaqeeyo ayaa maantay waxaa ceeb ah in faraha lala galo arimaha u qaaska ah Soomaalida.
Alloow Alle sida ii muuqataa kan Farmaajo la baxay maaha mid fahmaya shalay meeshii laga yimid iyo halka maantay loo socdaa.
Dhuusamareeb 3 wax walbo ka filo laakiin wuxuu Farmaajo rabo ama jecel yahay halkaa kasoo bixi maayaan…….
Mr farmaajo kuwii dhihi jiray wax looma yeersho aaween..
Amar ayaa lagu siiyay in uu tago shirka dhuusamareeb.
Weliba waxaa lagu dhahay hadaad ka baaqato annagu amaankaaga masuul kama nihin.
Madaxweynuhu 9;00 subaxnimo in uu barlamaanka tago ayey aheyd ilaa weli waa meereysanayaa.
Hadda waxaa golaha balmarenka galay gudigii doorashada oo xaliimo yareey hogaamineyso.
Tanu ragbeey rabtaa
Aawey Odagii @ AHMED HANGASH
ee lahaa hanaloo Kordhiyo Gunada 30 sodon qadbaan nahaye
Shirka waxaa laga rabey
5 waa joogtaa, 2 ayaa DARBIGA TAAGAN
Hadde dhaqanka Soomaalida ayaa ah in la maslaxeeyo Minority ee hala sugo
Ama sida Caalamka haloo socdo
Kheyre ayaa deyntii ka dhiibey, sidaas ayaa keentay markii hore.
Kablalax ii dhaaf.
Hawiye ayagu dibeey isu dhigayaan..
Madaama Marti marti loo yahay.
Dani iyo axmed madoobe. Ayaa isha farta ka gelinaayo.
Axmed madoobe wuu ogyahay haduu farmaajo siijeego dhibaato weyn ayuu kala kulmayaa.
Mr dani abkeey harti laangaab oo dhanbaa lagu kiciyay. Oo pudland waa ciir ciir.
Haduu farmaajo siijoogo dhibweynbaa uga imanaayo.
Iiga leexo kablalax hiraab ka ragsan.
aaway ciyaal kii kaakuma boys ee lahaa farmaajo looma sheego wax adeer waa ninkii isago raisulwasare ah kambala diyaarad laga saaray hal heys kiisuna ahaa baabuurti waaweyned baan dabada kagelaya ninka aaminsan farmaajo ayaa warka xalane diidi kara ha iska wato gaaweetada
sxb kablalax waa nin yaqaan maamul iyo dowlad iyo sida loogu noolado ama loo kala danbeyo wana rag is maqla oo kala adag oo iyagu isu meeriya wana rag xugun iyo xeerba yaqaan oo kala garanaya shalay iyo maanta inan gumeed oo dhan geed isaga xiray ee waxey la yihiin dad la xisaabtama oo yira joojiya halka hadii CALI GEEDI IYO CALI JEELE IYO FINISH Miidhan hawiye noqday oo cejelki laso geliyaba shaqeynayo ciladu waa xagaga ee kablalax maahan ee iga leexo dowlada kablalax maanta hadii booska daanyer farmaajo nin kablalaxa uu joogi lahaa ama dad waxey ku qancan buu ka gadi lahaa oo uu ku koror san lahaa ama si kale buu xaalku ahan lahaa wan huba taas
mida kale mid baan raba inaan halkan ka faham siiyo dadka halkan wax ku qorayey maalinki uu lahaa mid kan Ethiopian kaa ee mahdi wax naloooma shiigi karo adeera yaal soo xasusta muxu yiri Siciid deni maalin kaa isaguna keeba shaqeyey labadi hadal hada kahor baan magalada qalafe banan keeda ku arkay Ey LO la jooga
EY Loda raaca oo LO JIR ah hada waa sidi uun
Waan gartey lkn nasiib daro wali nin Kablalax Villada ma fadhiisan, hal sano oo uu joogey C/Rashid oo uu meesha keenay C/LLAAHI CIISE ah maahane,
Sanadkiina MUSUQ MAASUQA ayaa Caradii qabsadey oo waxaa loogu yeera Dowladdii 6 bilood ee MUSUQ MAASUQA.
Marka adigaan kugu soo celiyee
Maxaad leedahay VILLADA halagu tijaabiyo 6 bilood oo kale .
Cod kordhin haloo sameeyo oo waa iney wareega hore helaa inaa 50 cod.
Jaale Hawiye ilamada ilamada ceshada o joojiya calaacalka dalkan ragba
Hogaanka u haya meeshay idiinku taliyaan waad ku khasban tihiin waa lagaranaya
Waxaad doonaysaan bililiqadi iyo gabdhihii somaaliyeed e aad kufsan jirteen
O baytariga ku guri jirteen hogaamiye
Yaashinu taariikh madowbay somaaliya ku leeyihiin bal u fiirso inta oday
E hawiye ah midwaliba wuxu ku suntan
Yahay taariikh wadow mid sun dalka
Ku aasa mid badi somaaliya gata mid gabdhihi somaaliyeed carab ka gada o
Weliba carabta ugu daray dekedihii umada somaaliyeed ka dhaxashay awoowayaashed
Walaahi hadaan hawiye ahaanlahaa waan xishoon lahaa xukuna uma ooyeen
Waar islayaaba o umada kafadhiista belaayo idinla oohin badnaataye waar wuxu
Inan gumeed sana o calaacal badana waa maray yiraahdaan hilibkeni baalacunay
Sidi yubirki qoobdhiiglaha ahaa e samaanyaha
Dadka kaguran jiray habeen iyo maalin way calaacalayaan sodob sanaad dadka masaakiinta ah e kunool gobolka
Banaadir xansuuq kuwaden o ismaamuli kariwaydeen marku ilaahay idiin sodiray
Rag sharafleh o dalka iyo dadkaba nidaam
Iyo kala danbayn u sameyey baad xagxaganaysaa caku inan gumeed kuso
Koray caano dabeer ku dhashay cariish lagu dhisay xaar lo,aad caqli xumaa
Dawlada Nabad IYO Nolol howshina wata isha baxarka maylasocotaan ilma mooryaan kkkkkk
horta dadka somaliyed sas bey ka qaban kablalax oo aniga ila tashan maayan lakin waxan odhan lahaa hal mar oo kale bal halagu tijaabiyo ugu yaraan qabyaalad fiican oo wax lagu cuni karo ayaa laga ma caashaya iyo xin intaas suba waa wax dhan marki loo eego sida xaalku yahay maanta xaqiiqatan farmaajo halku dalka ku celiyey waa ka hooseysa meshi shiikh Shariif uga tegey
Waxaan daawanayey Khudbaddii Faramaajo uu Baarlamaanka ka hor jeediyey goor dhaweyd. Wuxuu ugu sheekeeyyey, wixii halkaa kasoo baxa oo aanu isla soo ogolaano qolada maamulada idinkaa ka awood badan idinka ayaana talada kama dambaysta ah yeelanaya.
Qorshaha ayaa ah in qolada Baarlamaanku ay diidaan waxa halkaa kasoo baxa haddii aanay ku jirin muddo kordhin iyo waxa uu waayadan oo dhan ku hadaaqayey ee loogu yeedho doorasho qof iyo cod ah.
Waxaad halkaa ka dhadhansan kartaa inaanu daacad ka ahayn tagista Dhuusamareeb ee uu indhaha caalamka oo kusoo jeedo is leeyahay ku qalad.
Laakiin xisaabta Farmaajo kuma darsan in beesha caalamku ay waa hore kasii hordageen khiddad kasta oo xilka loogu kordhinayo qaab kasta ha ku doonee.
Adoo raali ah suaal beeshii direed waad iloowdee marna hawiye lasafo marna daarood lasafo maxaa qaldan qaldan sxb war qoraaladaada walaahi bilaahi nooc minal munaafaq subxaanalaah war waxaan kaa sugaayay anoo dir weyn ah oo goboladaa dega iyo wax lamida kaama sugayn inaad daauudkii abgaal ku mashquusho wax dir ah laalays number one iyo mr bahal xeraale bye bye wax baa qaldan
ma taas baa shaki kaga jira waa nin qabsan oo aad ogeyd in shalay lasoo amray inu dhuusameb 3 aado ee sidu daacad uga noqanaya ogow war keygaa isago aan xaga iyo xaga toona jirin oo labada qolo mid heysan baa lacunaya oo cod loo qaaday marki uu hadlayo xit nin weyn maahan wuxu liite oo fulay sana
sxb mid baa kaa qaldan meesha qabiil loogama hadlayo ee siyaada somaliya iyo dadka isku heysta baa looga hadlaya waxa iskula dhegana kuma jirto dirti maanta ee hala gaaro marki meshan beel wax lagu qeybsanayo bal sidaan uso haabto dirta mida kale horay ayaan kugu sheegay anigu hadba wixii ila qaldan baan u miisa ee hawiye caana ima siiyo daarod na caana ima siiyo
sxb hadii aan sheego waxa daarod ku saxan yahay ama ku wanaagsan yahay maahan inaan la saftay hadii aan sheego wixii hawiye ku saxa yahay ama ku wanaagsan yahay maahan inaan la saftay hadii aan sheego wixii daarood ka qaldan ama hawiye ka qaldan maahan inaan kasoo hor jeedo mida kale maanta waxa isku heysta siyaasada somaliya waa labadas taas ayaan keeneysa inaan labadas ka hadlo waayo qoraalada kalshaale ayan halkan uga doodna marka ka eeg wax dirta ku saabsan marka iga warsug
waxaan filayaa in Madaxwayne 2 sano 8 bilood loogu daro in xilka u sii hayo Ummada somaliyeed.
Intaa kadibna 4 sano la doorto.
Mafdxwaynaha ka dambeeya Jaale Formaajo,wuxuu imandoonaa wadanka dawlnimo ka hana qaaday.
Isaaqiii heesaha ku fiicnaa waa in la maal galiyaa safdheer ha soo galaane.
Cimrigii Jiryoow,caynaanka hay,hay,hay,waligaa hay.Waxaa kale meesha ka maqan Guuroowgii Mr Xayoow.Labdaa hadii laysla helo jugta iyo jaanta ayaa laysla helayaa.
Warkii oo kooban oo koobo ku jira. Nuxurku Hadalkii Baarlamaanka uu ka jeediyey wuxuu ahaa annaga iyo idinku xilka aan dheeraysano.Aynu diiddo doorasho dadban oo aanu wada doono muddo korarsi dadban
Waxaad ugu dartaa in- CAASIMADIHII DIR aan la isku heysan ee waxa la isku heysto tahey Caasimadii Hawiye, waxa ku heystana yahiin Daarood
Marka Dirtu mar hore ayey ka XIJAABATEY in CADKOODA LAGU CAAYO MARNA LALA CUNO.
Sida DHAKOOL ayaa Xabsiga loogu geyn, JAMBALKII UU WATEY intaa Villa Hargeysa looga dhisin, ama Guno looga qorin Parliament Hargeysa.
Waqooyi kama taliyaan
Somaali haloo duceeyo waxay ilaaben inay gumaysiga ka xorooben 1960ki waa maxay
Beesha caalamka sidatiri iyo beesha caalamka e locabanayo waxan xusuustay
Marku laha siciid dani beesha caalamkuw hanagu aaminina madaxda somaaliyeed
E nagaso gaadha subxaanaka yaacadiim dadki somaaliyeed maskaxda madoobatay o ay gun
Kanoqdeen war xishoda dowlada somaaliya
Waxay awood u ledahay inay dalkeda ka caydhiso cidi sofara gelisa danaheda iyo
Arimiheeda gudaha siday u eriday ogaygi u qaabilsana qaramada midobay somaaliya
Odaygan cawaran e maraykanku kenay somaaliya hadu ku ekaanwayo shaqadiisa laadba badhiga lagaga dhufan doonaa
Raga aaminsan in somaaliya gumaysi kujirtow naftina u sheega inaad xortihiin
O madax banaani buuxda caalamka ka haysataan idinka isgumeyey e madixiina
Kor u qaada WBT
Somali Waqooyi waa Nabad ee ilaashada nabaddiina iyo dowladdiina lagu soo doortey one man one Vote.
Somali Koofur waaye waxa meesha looga hadlaayo.
waa iska cadahay taasi lakin ma shaqeyneysa qudbad ku sheega dhega hadalka iyo munafaq nimada iyo beenta ka kooban waa nin daad qaaday xunbo cuskay waana wax laga naxo nin daaroda oo nin hubera ka codsanaya inu kursiga ku celiyo marka kasoo qaad habeen kii uu dhuusameb joogay ee uu lahaa baarlamanka ayaan kula noqanaya shalay marki la amray inuu dhuusameb aado buu wacay daanyer mursal talefanka qaado ee uwac koodax bare iyo salad cali JEELE beri wan hadlaya ee usii sheek isago gariiraya oo qaadki ku socan la yahay markas buu hadana ku celiyey waxan kaa iloobey iga fiiri xasan firinbi iyo odawa
hadii aad qaadan laheyd talada Siciid deni
iskuma aadan dhex yaacden si fiican baad na u noolan laheyd hadii uu joogi lahaa booska farmaajana Somali iskuma dhex yaacden ee ma wax lagu heshiiyey oo lagu wada qanacsan yahay baa lagu wada joogi lahaa ama barqo cad baa lakala soocan laha geela ee daanyer mursal kama baryen inu kursiga kusii hayo muxu yidhi Lop suusacley ha iigu imaan
mida kale aan kuweydiye sxbow horta hargeysa ma Somaliya ayeey ka tirsan tahay mase waa wadan kale ?????
Horta anigu iskuma dhexyaacin e hadalka iska xas siciid dani anigu uma aqaan
Madaxwayne e waxan u aqaan gudoomiye muumul goboleed dalkana dowladba katalisa
Hadu ku farageliyo wuu ku khaldanyahay haku ekaado maamulkisa waad fahantay
Baan filaya waxan ka aaminsanahay
Hargaysa ma somaliyey katirsan tahay mise waa dalkale dee taas muran kama jiro
Somaaliyey ka tirsan tahay waana caasimadi labaad e somaaliya mayla socotaa
Wiilka xerada xerada fekerkisa kaso dhibanayow WBT
Qoraalkan wuxu kusocda wiil xeraale
Horta somaaliya waa xor waxayna xorowday 1960 ilaa hadana waa xor laascanood
Isaaq xoog kuma haysto cidaan leyahay halaga xoreeyo isaaq maaha e waa ninman
U dhashay laascanood o layiraahdo horgale dayuus dhiiyacabiin ah ku qadhaabta
Magaca umada hakaa kunol isaaq wuxu
Isku dayey inuu xoog kuqabsado buuhodle o burco dusheeda kutaal wuuna ku fashilmay
Axb laascanood iyada isqabsatay maqabsan cid debada ugatimi waad fahantay baanfilaya
hadii jawaab tadu tahay hargeysa waa somaliya maxad u tidha laascaanod waa laheysta oo xor maahan qoraal kagi kan ka horeyey na aad ugu tidhi somaliya waa xor ee ogaada marka saa ku leeyahay 5 daqiiqo kahor waxad so qortay somaliya waa xor mar walbana waxan arka adigo leh laascaanod waa la xoreyn hadan waxad ileedahay hargeysa waa somaliya mayla socata khaatumo marka xooga ii yara jilci
Land ofta Punt says:
Farmaajo waxaa hasyta” markii la tolay ayey oloshay”
Somalia dib u noqon mayso..Waa dal dadkiisa xoryihiin oo talada lawada yeelan..
Tuuladaa ayaad masuul ka tahay amnigeeda iyo horumareeda, xaafaddaha kule deriska ammaan sii.
Somalinimo ka shaqee,..
Ilow xoolo xadday iyo in deriskaaga boobto..
Work hard oo caruurtaada wax bar, hadii kale dhilooyinka xaafadda bariis lagu waso noqon.
Allow dadkaaga aqli sii.
hadii laga xoreynayo kuwii udhashay sida aad sheektay oo laga xoreeyo yaa loo xoreynaya bal iga qanci waxa tidhi waxa laga xoreynayo oo aan leeyahay halaga xoreyo maahan cid kale ee waa kuwii udhashay oo laascaanod iyada is qabsatay marka hadii laga xoreynayo dadki udhashay yaa loo xoreynaya oo la siinaya iyado xora oo kuwii udhashay laga xoreyey bal iga qanci taana
sxb intaas in la Isla fahmo ayeey somali u baahan tahay adeer nin walba tuuladisa xil ha iska saaro ma jiri doonto marooqsi danbe iyo kaare uu wato kaligi talis oo lagu weeraro ceel geel kacabayo iyo tuula laga soo qaaday canshurti kaarahan lagu soo gaday marki nin walba tuuladisa hagajiyo baa wax lagu heshiin kara
Qladan fadhi kudirirka ee HAWIYE CAQLI AY DALKA MEEL wanaagsan ku geeyaana MAJIRO HADANA MUQDISHO JEEGAANTII HARGAYSA OO SUUXDAY BAY DABIIBAYAAN QOLADA HAWIYE WAR HOOY DALKU CAQLI BUU RABAA IN LA ISUGU DUBA RIDO LAAKIIN MARBO INTA HOOLAAL WAA WAYN LAFADH FADHIISTO IN SIDA KUWA FADHI KU DIRIRKA COMETKAN KALSHAALE KUJIRA IIDOOR IYO HAWIYE WAXAY DOONAANBA HANOQDEENA DALKU CAQLI LAGU HAGO BUURABAA EE MAROBO DHUUSO IYO SPAARO VIVA ALLDALKA
Soduulayaasha laascanood xooga ku haysta cidkele maaha waa horgale dayuus
Gacansaar laleh jabhada SNM e gooni gosatada ah shacabka midnimada
Jeceli ma ogola hada ma fahantay sxb waa dadka kuwa u baahan in laga dulqaado
Qowlaysatada ku bohoobay ku mamay dhiiga
Shirkaan Dhuusamareen iyo kuwii ka horreeyay iyo dhamaan shirarkii Somalida galayeen 30kii sanno ee lasoo dhaafay waxeey ahaayeen maalaayanci iyo waqti dhumis. Saa dad karti, wadanninimo, dal jaceel, iyo wax wanaagsan ahba ma aheeyn daanyeertii kaqeeybgaleeysay. Daanyeer Farmaajo ayaana kow ka ah daanyeertaas. Sababta kaliya oo uu Dhuusamareen u tagay daanyeer Farmaajo waa amarka beesha caalamka.
In uu daanyeer caqli laawa yahay Farmaajo baaralamaankaan uu hadda leeyahay waqti iigu darra, sow maahan baarlamaankii lagu soo doortay 4.5? In uu ninkaan Farmaajo daanyeer caqli laawa ah yahay, maba oga waalidda iyo caqli xummada uu ku hadlayo marka ii dhaho doorasho qof iyo cod ayaan qaban!
Waxaase Farmaajo kasii daanyeersan Hawiye calool madoobe oo uu ugu horeeya doqon Shiiq Shariif oo dhahay aryaa Farmaajo ii geeya! Daanyeero.
Sxb soo dhawee shirkaan, at least hal faaido weyn ku jirta oo ah in Galmudug kacday oo Somali marti gelin karaan, aniga taas waa guusha 1aad oo Dhuusamareeb taal.✌️
Haddii Somali in ismaamulaan oo dowlad heshiis ku yihiin kasoo baxdo waa guusha 2aad.
Maamulka cusub ee Galmudug raggii in hiil iyo hoo ladaba istaagaan la rabay ayaa tahay.
Anaga Puntland in gobolada dhexe degaan oo maamul iyo kaladambayn la helo waa danteena iyo dan Somali.
Galmudug in kacdo Puntland ma rabto, jaahil nolol iyo Somalinimo wax ka aqoon ayaa ku andacooda.
Derisgaaga dhib qabo adna dhib la’aan ma noqon kartid..run
Qurbajoogta xanaaqsan ayaad kow ka tahay oo waxwalba dhaliila.
Nalka yar ka iftiimaya Galmudug waan ku diirsaday..run✌️🇸🇴